Neymar aabihiis oo go’aamiyay wararka xanta ah ee ku aadan in wiilkiisa uu ku biirayo Real Madrid – Gool FM
(Yurub) 12 Abriil 2019. Neymar aabihiis ayaa beeniyay warar xanta ah ee sheegaya in wiilkiisa lala xiriirinayo inuu ku biirayo kooxda Real Madrid inta lagu jiro suuqa kala iibsiga xagaaga ee soo socda, ama uu ku laabanayo kooxdiisii hore ee Baracelona.
Dhinaca kale Neymar aabihiis ayaa sharaxay in wiilkiisa uu weli heysto 3 sano ee ah heshiiska uu ku joogo kooxda PSG, isla markaana uusan xiligan qorsheyneynin inuu ka tago garoonka Parc des Princes, isagoo tilmaamay in wax walba ee lagu sheego warbaahinta ay yihiin warar been ah.
“Mustaqbalka Neymar? Qandaraaska weli wuu dheer yahay, weli waxaan joognaa xilli ciyaareedka labaad, mana gaarin xitaa kala bar qandaraaska, sidaasi darteed waa inaan muujinaa deganaan”.
“Wararka xanta ah ee ku saabsan mustaqbalka wiilkeyga, ma ahan kuwa dhamaanaya, waa wax iska caadi ah in kooxo ay ku riyoonayaan lasoo saxiixashada Neymar, dabcan kooxaha aan ka hadlayo waa kuwa jira, laakiin riyadiisu waa inuu sii joogo Paris Saint-Germain, wuxuuna sheegay inuu sidaas xiiseenayo, marka uu saxiixay heshiiskiisa laba sano kahor”.
“Waa inay dareemaan taageerayaasha Paris Saint-Germain daganaan, sababtoo ah Neymar marna ma doonayo inuu baxo, wuxuuna doonayaa in kooxda uu ka caawiyo inuu kula guuleysto koobab mustaqbalka”.